Gabadh derbi jiif ahayd oo mudo kooban caan ku noqotay - Jigjigaonline
HomeWararka CaalamkaGabadh derbi jiif ahayd oo mudo kooban caan ku noqotay
Sarkaal ka tirsan booliska Magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa mar uu marayay wado ku taala Magaaladaas waxaa uu kula kulmay gabadh derbi jiif ah oo heeseysa, waxaana uu go’aansaday in uu muqaal kaga duubo taleefonkiisa, balse taas waxay badashay noolasha gabadha.
Askarigii ayaa markii uu duubay muuqaalka gabadha iyadoo heeseysa, waxaa uu soo dhigay barta ay booliska ku leeyihiin Twitter-ka, waxaan saacado gudahood daawatay malaayin qof oo ka helay codka gabadha, iyagoona ka damqaday xaaladda ay ku nooshahay gabadha.
Emily Zamourka ayaa muuqaalka laga duubay iyadoo ku heeseysa heestii Puccini’s ee ay qaaday fanaanada caanka ah ee O Mio Babbino Caro.
Codka hallaasiga ah ee 52 jirkan ee ay heesteeda qaaday gabadha aya soo jiitay quluubta dad badan, oo qaar badan oo kamid ah ayaa Twitter-ka kaga hadlay arrintaas, iyagoo aad ula dhacsan codka gabadha ay ku luuqeneyso.
Mid kamid ah ayaa waxaa uu yiri “codkeeda waa cajiib, waxaan u rajeynayaan noolal fiican, wuu na mahadsan yahay sarkaalkii booliska ahaa ee aqoonsaday codka hallaasiga ah ee gabadhan, baraha bulshadana dadka kula wadaagay!”
Hasayeeshee qaar kamid ah isla dadkaas isticmala Twitter-ka ayaa su’aal geliyay in Zamourka ay tahay derbi jiif oo aan heysnin hoy, waxaana mid kamid ah uu yiri “Boorsada ay wadato, dharka ay xiran tahay iyo sida timaheeda ay nadiif u yihiin marka la eego, waxay u muuqataa qof soo dhar iibsaday oo iska laafiyoonaya”
Shaqada la siiyay
Dadka qaar ayaa sheegay inay horay u arkeen gabadhan, iyadoo derbiyada jiifta,waxaana mid kamid ah uu yiri “Horay ayaa u arkay gabadhan oo waxaan dhowr jeer ku arkay iyadoo baaskiil ku kaxeneyso tareenka iyo iyadoo wadada ku quudineysa shimbiro, waligeyna kuma fikirin inay leedahay codkaas hallaasiga”.
Ms Zamourka oo la hadashay wargeyks told the Los Angeles Times in dalka Mareykanka ay timid iyadoo 24 sano jir ah, kana timid dalka Ruushka, halkaas oo ay sheegtay inay ku baratay sida loo garaaco turumbada iyo biyaanada heesaha.
Sidoo kale gabadhan ayaa waxay sheegtay inay la qaadi jirtay heesaha fannaaniinta hobolada opera performers, marka ay ka heesayaan telefishenka.
Mareegtada TMZ ee wax ka qorta dadka caanka ah ee adduunka ayaa markii ay caan noqotay Zamourka, waxay siiyeen shaqo, shaqadaas oo ah inay duubto heesaha.
Dad badan ayaa aad ugu mahad naqay sarkaalkii booliska ahaa ee ka duubay muuqaalka, iyadoo heeseysa.
Markii ay dad badan ka war heleen xaaladda gabadhan ayaa waxaa u gurmaday dad badan oo intanetka lacago ku uruuriyo, kuwaas oo u ustaagay sidii loo caawin lahaa Zamourka.
Dadkan ayaa sidoo kale doonayay inay gabadhan u iibiyaan qalab ay u adeegsan jirtay muusigada oo laga xaday, wuxuuna qofka maamulo boggaas uu sheegay in uu aad uga helay codka gabadha.
Mid kamid ah barahaas intarnetka ayaa sheegay in gabadhan aysan u baahneyn in xoogahaa lacag ah gacanta loo saaro, balse ay u baahan tahay in la gacan qabto.
Marka laga soo tago in gabadhan ay heshay shaqo fiican oo mushaar wanagsan lagu siinayo, haddana lacag dhan kumanaan kun oo doolar ayaa loo uruuriyay Zamourka, waxaana uruurinta lacagtaas gacan ka geystay dowladda hoosee ee Magaalada Los Angeles.
Noolasha Zamourka ayaa muddo kooban isbadeshay, oo waxay wakhti yar ku heshay caanimo iyo hanti.
Mid kamid ah saraakiisha dowladda hoose ee Los Angeles ayaa Zamourka u ballan qaaday inay ka qeybgasho bandhig faneed maalmaha soo socda lagu qabanayo dalka Mareykanka, kaas oo loogu debaaldagayo dhaqanka iyo taariikhda dadka Talyaaniga.
Shimbiraha ay jecleyd
Gabadhan ayaa la sheegay in sidoo kale ay xanaaneyso shimbiro, oo waxaa loo soo bandhigay dalab ah inay ka qeybgasho bandhig faneed lagu qabanayay magaalo kale, balse waxaa la sheegay inay ka cudur daaratay sababa la xirira shimbiraha ay xanaaneyso oo ay sheegtay in aysan ka tegi karin.
Gabadhan ayaa haatan noolasheeda ay isbadeshay, oo waxay heshay noolal ka fiican tii hore ee ay ku nooleyd.